Ogaden News Agency (ONA) – Baarlamaanka Itoobiya oo La Horgaynayo Sharci Muhiim Ah.
Baarlamaanka Itoobiya oo La Horgaynayo Sharci Muhiim Ah.
Sida ay wararku nagusoo gaadhayaan xeer ilaaliyaha guud ee Gumaysiga Itoobiya Birhanu Zegaye ayaa wuxuu sheegay in la horgayn doono baarlamaanka Gumaysiga Itoobiya xeer lagaga noqonayo ururo iyo shaqsiyaad ay horay xukuumadii woyaanuhu ugu calaamadaysay Argagixisanimo.
Is badalka siyaasadeed ee ka socda Gumaysiga Itoobiya ayaa isa soo taraya ayadoo ay meesha ka sii baxayso nidaamkii woyaanaha ee ku dhisnaa dilka, dhaca, kufsiga iyo xaqiraada xuquuqda qawmiyadaha kala duwan ee xukunkooda ku hoos dulman.
Jabahada ONLF, OLF, Ginbot 7 iyo Saxafiyiin badan ayaa waxay Gumaysiga Itoobiya horay ugu sun tanaayeen Argagixiso halka caalamka iyo dunida inteeda kale ay ugu suntanaayeen ururo gobonimo doon ah oo is difaacaya.
Si kastaba ha ahaatee waxaan la ogayn an sixinta baarlamaanka Gumaysiga Itoobiya qodobadan la hor dhigi doono ee ku aadan in meesha laga saaro shaqsiyaad iyo ururo horay ugu suntanaa argagixiso ayagoo loo aqoon san doono inay na ahayn Argagixiso balse ay yihiin muwaadiniin leh sharaf iyo karaamadii muwaadin kasta uu lahaa.